Howlagalo amniga lagu sugayo oo ka socda magaalada Kismayo
Taliska Booliska Puntland ayaa ka warbixiyey dad ay u soo qabteen dilka gudoomiyihii gobolka Nugaal. Riix Halkan
Arbaco, Nov 12, 2014 [ GO]- Ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ayaa maanta iyo caawa ka waday magaalada Kismaayo howlgalo amniga lagu sugayo ayagoo baarayay gaadiidka wadada marayay iyo dadka la socda.
Dad ku dhow 70 qof ayey ciidamada ammaanka soo qabteen kuwaas oo loo dhaadhacshay xabsiyada ciidamada nabad sugida ay ku leeyihiin magalada Kismaayo.
Saraakisha ammanka magalada Kismayo ayaa sheegay in dadka ay xireen lala xiririnayo tuhun ah in falalka ammaanka lidiga ku ah ku lug leeyihiin.
Dhinaca kale ururka Al-shabaab ayaa degaanka Kudhaa weerar kadis ah uu ku qaadey maalmihii la soo dhaafey ku laayey ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland iyadoo dhinaca kale weeraro qaraxyo ka fuliyey goobo ka tirsan magaalada Kismayo.
Puntland oo wacad ku martay in ay u aargudeyso gudoomiyihii Nugaal 30.03.2020. 19:00
Dad loosoo qabtay weerarkii lagu dilay gudoomiyihii gobolka Nugaal 30.03.2020. 18:00
Puntland: Laba qadiyadood oo diirada la saarayo xal u helistooda 30.03.2020. 17:21
Farmaajo oo ka qeybgalay shir muuqaal ah oo looga hadlay Corona 30.03.2020. 16:21
Benjamin Netanyahu: Ra'iisul wasaaraha Yahuuda oo karan-tiil galay 30.03.2020. 16:15
Aas Qaran oo loo sameeyay gudoomiyihii gobolka Nugaal 30.03.2020. 16:08